यस्तो छ एकीकृत माओवादीको ११ प्रदेश र २४ उपस्वायत्त क्षेत्रसहित राज्य पुनरसंरचना गर्ने प्रस्तावको चुनावी घोषणापत्र (घोषणापत्रको पूर्ण पाठसहित) – Kathmandutoday.com
यस्तो छ एकीकृत माओवादीको ११ प्रदेश र २४ उपस्वायत्त क्षेत्रसहित राज्य पुनरसंरचना गर्ने प्रस्तावको चुनावी घोषणापत्र (घोषणापत्रको पूर्ण पाठसहित)
काठमाण्डु टुडे २०७० कार्तिक १ गते १८:३९ मा प्रकाशित
काठमाण्डु –एकीकृत माओवादीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपसहित ११ प्रदेश र अल्पसंख्यक समुदायका लागि २४ उपस्वयात्त क्षेत्र निर्माण गर्ने संबिधानसभा निर्वाचनको प्रतिबद्धतापत्र आज सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको छ ।
‘एकीकृत नेकपा माओवादीको परिकल्पना स्वाधीन,समृद्ध र समतामुलक नयाँ नेपालको स्थापना’ भन्ने नाराका साथ १५ बर्षमा आत्मनिर्भरता र समतामुलक समृद्धि,उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित दुई अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच बर्षमा एक हजार चारसय अमेरिकी डलर,१० बर्षमा तीन हजार तीन सय डलर,२० बर्षमा १० हजार सात सय डलर र ४० बर्षमा ४० हजार डलर पुरयाउने लक्ष्य घोषणापत्रमा निर्धारण गरिएको छ ।
वेरोजगारी अन्त्यका लागि युवाहरुलाई पूर्ण रोजगार र स्वरोजगार एनेकपा माओवादीको मुख्य सरोकार जस्ता नारा घोषणा पत्रमा समेटिएको छ । घोषणापत्रमा वेरोजगारी अन्त्य गर्ने १५ बर्षे कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । घोषणापत्रमा जसको नीति उसको नेतृत्व राष्ट्रको नेता अध्यक्ष प्रचण्ड,एकीकृत माओवादीलाई सबैको भोट,यथास्थितिवादीहरुलाई दरिलो चोट,पहिचान सहितको संघीयताका पक्षधरलाई दुई तिहाई मत,स्थिर सरकारका लागि एकीकृत माओवादीलाई पूर्ण बहुमत,पहिचानसहितको संघीयता,संघीयतासहितकोसंबिधान,संबिधानसभाबाटै संबिधान एनेकपामाओवादीको अभियान जस्ता नारा घोषणापत्रमा राखिएको छ ।
– नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने कुरा ‘प्रस्तावना’मा उल्लेख गर्ने ।
– संयुक्त राष्ट्रसंघ वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, समानता, राष्ट्रिय हित र पारस्परिक लाभका आधारमा छिमेकी लगायत संसारका सबै देशहरु सँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने र यस विपरितका अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरु कानुन बमोजिम बर्जित र दण्डित हुने ।
– नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र विगतमा भएका सबै सन्धी—सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धी—सम्झौताहरु खारेज गर्ने र राष्ट्रिय हित अनुकुलका नयाँ सन्धी—सम्झौताहरु राज्यले गर्ने ।
– गैर—आवासीय नेपालीहरुको नेपली नागरिकतालाई निरन्तरता दिने ।
– संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार आदि सार्वभौम गुणहरु युक्त पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाइने छ ।
– प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल वा संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, कुनै पेशा वा व्यवशाय गर्ने स्वतन्त्रता, कतै आवातजावत वा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता आदिको पूर्ण ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
– सबैलाई समानताको हक, शोषण विरुद्धको हक, गोपनीयताको हक, सम्पत्तिको हक, सूचनाको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, यातना विरुद्धको हक, प्रकाशन–प्रशारणको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, वातावरण सम्बन्धी हक, देश निकाला विरुद्धको हक आदिको प्रत्याभूति गरिने छ ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको मौलिक हक स्थापित गरिनेछ ।
– हजारौँ वर्षदेखि पितृसत्तात्मक विभेद र उत्पीडनमा परेका महिलाहरुलाई व्यवहारतः सवै क्षेत्रमा पुरुषको वरावरीमा पु¥याउन थप अधिकारको रुपमा राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
– ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको रुपमा दलितहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांँस्कृतिक लगायतका क्षेत्रहरुमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
– मुस्लिम समुदाय माथिका सवै खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न उनीहरुलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
– भूमिमाथि वास्तविक जोताहा किसानको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।
– श्रमिक र मजदुरहरुलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद र शोषण—उत्पीडनका विरुद्ध माग राख्ने, सामुहिक सौदावाजी गर्ने, हड्ताल गर्ने हक हुनेछ ।
– सबै बालबालिकाहरुलाई पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
– युवाहरुलाई आफ््नो शारिरिक, मानसिक र समग्र व्यक्तित्व विकासको निम्ति राज्यबाट सहयोग र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– सबै प्रकारका अपांगहरुलाई पहिचान, सम्मान, प्रतिनिधित्व र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
– जेष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला र आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई राज्यबाट हेरचाह र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
– विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक आन्दोलनका शहिद परिवार, बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवार र अपांग तथा घाइतेहरुलाई राज्यका सबै संयन्त्रमा सहभागिता, सरकारी र सार्वजनिक सेवामा विशेष सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा, राहत र निवृत्ति भरणको हक हुनेछ ।
– गरिविको रेखामुनी रहेका विपन्न बर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
– लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति र समुदायलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्ने र राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा लगायत आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– दुर्गम, पिछडिएका र उत्पीडित क्षेत्रका जनतालाई विकासको समान अवसर, राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई परिचय, सम्मान र समानुपातिक सहभागिताको हक हुनेछ ।
– मजदुर, किसान लगायतका श्रमजीवी जनतालाई राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
– राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक ठानिएमा संघीय व्यवस्थापिकाका दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय गरेर त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिनेछ ।
– राज्यका सबै अंगहरुमाथि आम नागरिकहरुको अनुगमन, निगरानी र हस्तक्षप सुनिश्चित गर्न विभिन्न तहका नागरिक लोकपालको व्यवस्था गरिनेछ ।
– संघीय नेपालको मूल तहगत संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ ।
– संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहनेछन् ।
– स्थानीय तहमा प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित् परिषद रहनेछ ।
– मूल संरचनाका अतिरिक्त विशेष संरचनाका रुपमा प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्नेछन् । प्रदेशभित्र स्थापना गरिने एक जाति÷समुदाय वा भाषाको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई ‘स्वायत्त क्षेत्र’ भनिनेछ । प्रदेशभित्र अतिअल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रुपमा रहेका जाति, समुदाय र साँस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ भनिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको, सम्वन्धित प्रदेशभित्र पिछडिएको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा रहेको क्षेत्रलाई विकास गर्न वनाइने इकाइलाई ‘विशेष क्षेत्र’ भनिनेछ ।
– स्वायत्त क्षेत्रमा प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित् परिषद् रहनेछ ।
– नेपालको एकात्मक राज्यलाई पुनर्संरचना गरी जाति,भाषा र क्षेत्रका ‘पहिचान’ र आर्थिक अन्तर सम्वन्ध, पूर्वाधारविकास, प्राकृतिक साधनश्रोत र प्रशासनिक सुगमताका ‘सामथ्र्य’ का आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिनेछः (हेर्नुहोस् नक्सा १) १.लिम्वुवान २.किराँत ३.ताम्सालिङ ४.नेवाः ५.तमुवान ६.मगरात ७.भेरी—कर्णाली ८. सेती—महाकाली ९. थारुवान १०. मधेस ११.कोचिला । प्रदेशहरुको यथार्थ सीमांकन राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा गरिने छ ।
– प्रदेशहरु भित्र निश्चित क्षेत्रमा वाहुल्य भएका वा सघन उपस्थिति भएका निम्न जाति÷समुदायका ‘स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माण गरिनेछन् ः १. शेर्पा २. कुमाल ३. राजवंशी ४. सुनुवार ५. माझी ६. दनुवार ७. चेपाङ ८. सन्थाल÷सतार ९. धागड÷ उराउ ÷झँगड १०. थामी ११. धिमाल १२. भोटे÷लामा १३. थाक्खा १४.दराई १५.थकाली १६.पहरी १७.छन्तेल १८.बराम १९.जिरेल २०. दुरा २१.मेचे २२.लेप्चा २३.व्यासी २४.ह्याल्मो त्यसरी नै आवश्यकता अनुसार ‘संरक्षित क्षेत्र’ निर्माण गरिने छन् ।
– स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछन् ।
– गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण संघीय सरकारले निश्चित गरेको मापदण्ड वमोजिम प्रादेशिक सरकारले गर्नेछ ।
– संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको अधिकारको वाँडफाँड अनुसूची–२ अनुसार हुनेछ ।
– संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विषेश संरचना वीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।
– संघीय इकाइहरु वीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न संघका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय गृहमन्त्री, संघीय अर्थमन्त्री र प्रदेशका प्रमुखहरु रहेको एक अन्तरप्रादेशिक परिषद् रहनेछ ।
– प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्रलाई स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार प्रत्याभूत हुनेछ ।
– आदिवासी —जनजाति र मधेसी लगायतका उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई उत्पीडनको विरुद्ध कदम चाल्न राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । तर सो अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधनिता र भौगोलिक अखण्डतालाइ खलल पु¥याइने छैन ।
– प्रदेशहरु र स्वायत्त क्षेत्रहरुमा सम्वन्धित प्रदेश÷क्षेत्रमा वाहुल्य रहेको उत्पीडित जाति÷समुदायको सदस्यलाई प्रमुख नेतृत्व तहमा राजनीतिक अग्राधिकार हुनेछ । तर सो व्यवस्था दुइ कार्यकाल अथवा १० वर्ष पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
– तीन तहका प्रतिनिधिसभा हुनेछन् । केन्द्रमा संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रान्तमा प्रान्तीय प्रतिनिधिसभा र स्थानीय रुपमा नगर÷गाउँ परिषद् रहनेछन् ।
– संघीय व्यवस्थापिका दुइ सदनात्मक हुनेछ । तल्लो सदनमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधहरु चुनिनेछन् भने उपल्लो सदनमा सवै प्रान्तहरुवाट बराबर प्रतिनिधि चुनिनेछन् ।
– प्रान्तमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ ।
– सवै तहका व्यवस्थापिकाको संख्या सकेसम्म सानो राखिनेछ ।
– सवै तहका व्यवस्थापिकाको गठन वहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अनुसार विभिन्न वर्ग, जाति÷जनजाति, महिला,दलित आदिको समावेसी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्धारा गरिनेछ । तिनमा मजदुर, सुकुम्वासी, गरीवी किसान लगायतका उत्पीडित जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
– जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी वनाइ राख्न सवै तहका व्यवस्थापिकाहरुमा प्रत्याह्वान सम्वन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
– केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
– राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष, सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले दैनिक सरकार र प्रशासन संचानलको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन ।
– राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुइ पूर्ण अवधिको निम्ति भन्दा वढी हुनेछैन ।
– प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख (गभर्नर) र मुख्य मन्त्री हुनेछन । राष्ट्रपतिले सम्वन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछन् ।
– प्रत्येक स्थानीय निकायमा कार्यकारिणी प्रमुखको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष रहनेछन् ।
– जनतालाई औपचारिक मात्रै होइन वास्तविक न्याय सरल र सुलभ ढंगले दिलाउनका लागि र विधिको शासनको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रत्याभूत गर्नकालागि सवल, सक्षम, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको गठन गरिनेछ ।
– संघीय संरचना अनुरुप तीन तहका अदालत रहनेछन् । केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्ला/स्थानीय अदालत हुनेछन् ।
– संविधान र संघीय कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार संघीय सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । साथै संघ र प्रदेश बीचको विवाद, प्रदेश र प्रदेश वीचको विवाद, संघीय संवैधानिक अंगहरु वीचको विवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक मामिलासम्वन्धी विवाद आदि संघीय सर्वोच्च अदालतका शुरु क्षेत्राधिकार हुनेछन् ।
– प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरको सवैभन्दा माथिल्लो स्तरको असाधारण अधिकार क्षेत्र युक्त एक उच्च अदालत हुनेछ ।
– सवै नागरिकको न्यायमा पहुँच पु¥याउन र सानातिना मुद्दा मामिला र विवाद स्थानीय स्तरमै छिटो—छरिताो तरिकाले टुँग्याउन स्थानीय अदालतहरुको व्यवस्था गरिनेछ । साथै पारिवारिक विवाद, महिलामाथिको घरेलु हिंसा, दलितहरुमाथि छुवाछुत, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिका सांस्कृतिक, धार्मिक विवाद इत्यादिको निरुपण गर्न आवश्यकता अनुसार लोक अदालत वा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
– आवश्यकता अनुसार खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दा हेर्न बिशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गर्न सकिनेछ ।
– संघीय संरचना अनुरुप सरकारी प्रशासनिक सेवालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा व्यवस्था गरिनेछ ।
– निजामति, जंगी, प्रहरी र अन्य सेवाहरुलाई जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त वनाउन र संघीय संरचना अनुरुप पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गरिनेछ ।
– भ्रष्टचारमुक्त सुशासनको प्रत्याभूत गराउन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न भ्रष्टचार निरोधक संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
– माओवादी जनमु्क्ति सेना नेपाली सेनामा विधिवत् समायोजन भैसकेको स्थितिमा नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य वाहक शक्ति नेपाली सेना लगायत समग्र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ ।
– मधेसी, महिला, जनजाति लगायत सवैको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र आधुनिकिकरण गरिनेछ ।
– १८ वर्ष भन्दा माथिका सवै स्वस्थ नागरिकहरुलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
– हाल विद्यमान संवैधानिक अंगहरु÷आयोगहरु अतिरिक्त महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी÷जनजाति आयोग, अपांगतासम्वन्धी आयोग, मजदुर—किसान आयोग आदिलाई संवैधानिक अंगको रुपमा गठन गरिनेछ ।
– अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्त्य गरिनेछ । मुख्यतः सामन्ती भूमि—सम्वन्धको अन्त्य गर्दै ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तको आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा उत्पादक शक्तिहरुको तीव्र विकासमा जोड दिइनेछ ।
– देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक एकाधिकार पुँजिवादको वर्चश्वलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरुप वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई छुट दिइनेछ ।
– राज्य र निजी क्षेत्र वीचमा सहयोगात्मक सम्वन्ध रहनेछ । सार्वजनिक हितमा प्रतिकुल नहुने गरी निजी सम्पत्तिमाथि अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनेछ । राज्यले दायित्व लिनु पर्ने विशेष क्षेत्रमा वाहेक अन्यत्र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । लगानीका क्षेत्रमा सार्वजनिक—निजी साझेदारी यच एएए प्रणालीलाई पश्रय दिइनेछ ।
– अर्थतन्त्रमा साना उत्पादनकर्ता र व्यवसायीको वाहुल्यतालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा सहकारी प्रथालाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यसम्प्रभुता र आवासमाथिको सवै जनताको मौलिक हक स्थापित गर्दै तिनको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यले लिनेछ ।
– अपांग, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, अतिसिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति आदिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।
– राज्य पूर्ण रुपले धर्म निरपेक्ष रहनेछ । कसैमाथि पनि धर्मको आधारमा भेदभाव गरिनेछैन ।
– संघात्मक प्रणाली लागू भए पछि पनि देशभर साझा नागरिकताको नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
– नेपाल वहुभाषिक मुलुक भएकाले यहाँका सवै भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा स्थापित गरिनेछ ।
– संसारका सवै मुलुक र मुख्यतः दुइ ठूला छिमेकी भारत र चीन संग पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध राख्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ । परम्परागत ‘दुइ ढुंगा वीचको तरुल’ को सोचको सट्टा दुइ ठूला अर्थतन्त्र र शक्ति वीच ‘गतिशील पुल’ को नयाँ अवधारणा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विकास र परिचालन गरिनेछ ।
– भारत संगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी लगायत राष्ट्रिय हित प्रतिकुल देखिएका सवै पुराना सन्धी—सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यता अनुरुप परमार्जन गर्ने, खारेज गर्ने र नयाँ सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
– नेपाल र भारतवीचको खुला सीमानालाई आपसी हितमा व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ । दुइ देश वीचका सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्याहरुवारे सत्यतथ्यका आधारमा र आपसी हितमा यथासक्य छिटो कुटनीतिक पहलद्धारा समाधान गरिनेछ ।
– विदेशमा रहेका प्रवासी , गैरआवसीय नेपालीहरुको हक हितको रक्षाकोलागि नेपाली दूतावासहरु मार्फत् विशेष प्रयत्न गरिनेछ र त्यसकालागि दूतावासहरुको आवश्यक क्षमता वृद्धि गरिनेछ । गैर—आवसीय नेपालीहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– नेपाली श्रमिकहरुको संख्या ठूलो भएका देशहरुमा अनिवार्य रुपमा श्रमसहचारीको व्यवस्था गरिनेछ । नेपाली दूतावास र नियोगहरुलाई आर्थिक कुटनीतिको क्षेत्रमा विशेष सक्रिय गराईनेछ ।
– विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपालका राष्ट्रिय महत्वका निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
– नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट निश्चित अवधि भित्र मुक्त गर्न र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न चरणवद्ध योजना लागू गरिनेछ ।
– सवै अन्तर्राष्ट्रिय गैर—सरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग रकम एकद्धार प्रणालीबाट जाने व्यवस्था मिलाइनेछ । विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुले सिधै आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
– हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारको अन्तिम समयमा जारी गरिएको वेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य—निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सोको निरुपण पश्चात् छिटो भन्दा छिटो उक्त अत्यन्तै महत्वपूर्ण आयोग गठन गरी पन्ध्रहजार भन्दा वढी द्वन्दपीडित परिवारहरुको जायज सरोकार सम्वोधन गरिनेछ र देशमा दिगो शान्तिको आधार निर्माण गरिनेछ ।
– हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारद्धारा प्रत्येक शहीद र वेपत्ता परिवारलाई राहत स्वरुप १०÷१० लाख रुपियाँ (रु.५लाख नगद र वाँकी तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा शेयर) दिने गरी भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– जनयुद्ध र सवै राजनैतिक आन्दोलनका घाइते र अपांगहरुलाई सम्मानजनक आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ।
– शहीद, वेपत्ता, घाइते÷अपांग योद्धाहरुका छोराछोरी र परिवारको सामाजिक सुरक्षाको विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
– स्वेच्छिक अवकाशमा निस्केका पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर र सदस्यहरुलाई सम्मानजनक आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ । पूर्वजनमुक्ति सेनाका अप्रमाणित लडाकुहरुलाई विशेष राहत प्रदान गरिनेछ ।
– सवै रानीतिक आन्दोलनहरुमा जेल परेका, घाइते÷अपांग भएकाहरुलाई परिचयपत्रको साथै विशेष सम्मान र सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
– शहीद र वेपत्ता पारिएकाहरुको नाउँमा सडक, शिक्षण–संस्था, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल आदिको नामाकरण गरिनेछ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय स्तरमा शहीद स्मारकहरुको निर्माण गरिनेछ ।
– जनयुद्ध र राजनीतिक आन्दोलनहरुमा विशिष्ठ भूमिका निर्वाह गरेका क्षेत्रहरुको विकासकोलागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
– निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ र दलहरुको आय—व्यय पारदर्शी गराईनेछ ।
– आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा संगठित अपराध गर्ने वा भ्रष्टचारजन्य कार्य गर्ने गिरोह तथा व्यक्तिलाई पार्टीमा संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिइनेछैन । सभासद्हरु र मन्त्रीहरुलाई पदभार सम्हालेको र पदमुक्त भएको १५ दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लगाइनेछ ।
– भ्रष्टचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी भ्रष्टचार गर्ने कुनै पनि पदाधिकारी माथि मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएर आयोगलाई अधिकार सम्पन्न वनाइनेछ र ठूला भ्रष्टचारीलाई हदैसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
– भ्रष्टचारजन्य क्रृयाकलाप सम्वन्धी सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने र सूचनादाताको संरक्षण सम्वन्धी ९धजष्कतभि दयिधभच० कानून ल्याइनेछ ।
– शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति विना न त सुशासन कायम हुनसक्छ न लगानी मैत्री वातावरण वन्न सक्दछ । त्यसैले सुरक्षा अंगहरुमा आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन गरी सुरक्षा प्रशासनलाई प्रभावकारी वनाइनेछ, शान्ति सुरक्षाको राम्रो प्रत्याभूति गराइनेछ र सवै प्रकारका अपराधजन्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
– विकास निर्माणको ठेक्कापट्टामा इ—विडिङ्ग अनिवार्य गर्ने र सवै सरकारी कार्यालयहरुले वस्तु खरिद गर्दा इ—विडिङ्ग को पक्रिया अवलम्वन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
– जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु गाउँ विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय आदिको संगठनको पुनर्संरचना गरिनेछ । ती कार्यालयमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था प्रभावकारी वनाइनेछ ।
– लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन वनेका स्थानीय निकायहरु वास्तवमा आज अनियमियतता र भ्रष्टचारको थलो वनेका छन् । जग कमजोर भएसम्म उपरीसंरचना वलियो हुन सक्दैन । त्यसैले नयाँ संविधान वनेपछि स्थानीय निकायको संरचना समेत नयाँ हुने भए पनि त्यो प्रक्रियाले अझै केही वर्ष लिनसक्ने भएकाले संविधानसभा निर्वाचनको छ महिन भित्र स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ र स्थानीय निकायहरुलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी वनाइनेछ ।
– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगतको भत्ता निश्चित समयावधी तोकी सोही मितिमा मुलुकभर एकैचोटी उपलव्ध गराउने र सो मिति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सम्पूर्ण नगरपालिकाहरु, जिल्ला सदरमुकामहरु र वाणिज्य वैंक भएका गाउँ विकास समितिहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वैंक मार्फत् उपलव्ध गराइनेछ ।
– नागरिकता, विकस आयोजना र घरजग्गा सेवा प्रदान गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका २४० स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापनमा संलग्न माथिल्लो दुइ तहका पदाधिकारी र निजामति सेवाका विशिष्ठ श्रेणी र सवै विभागीय प्रमुखसम्मले अनिवार्य नतिजामूलक कार्यसम्पादन करार गर्नै पर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
– राज्यका संयन्त्र र प्रशासनिक संगठनमा पुनर्संरचना र व्यापक सुधार मार्फत् सुशासन परिपाटी प्रभावकारी वनाइनेछ । संघीयताको उद्देश्य अनुरुप अधिकार वाँडफाँड विकेन्द्रित गर्दै लगिनेछ । वर्तमान प्रकृयामुखी प्रशासनलाई परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाइनेछ । उपेक्षित, उत्पीडित र विपन्न वर्गलाई सेवा सुविधा विशेष रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
– न्यायको क्षेत्रलाई लोकतान्त्रीकरण गर्दै न्याय छिटो छरितो दिलाउने र गरीव तथा असहायको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक वजेट प्रस्तुत गरिनेछ र वजेटको अनिश्चितताले आर्थिक विकासमा पार्ने प्रतिकुल असरको निवारण गरिनेछ ।
– जडिवुटी लगायत कच्चा रुपमा निर्यात भैरहेका वस्तुलाई अर्ध—प्रशोधित रुपमा निर्यात गरिनेछ ।
– मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरु प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ र पेट्रोलियम पदार्थको विद्युत÷उर्जामा भइरहेको खपत घटाउँदै लगिनेछ ।
– मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी तथा फलपूmलहरु, पशु र पशुजन्य पदार्थ, माछा, पुष्प व्यवसाय, प्रसोधित खाद्यन्न आदिको देशभित्रै उत्पादनमा जोड दिई आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ ।
– मुख्य उपभोग्य वस्तहरु र तिनको कच्चा पदार्थ आयत गर्ने देशहरुको पहिचान गरेर त्यस्ता कच्चा पदार्थ आयत गरी स्वदेशमै ती वस्तुहरु उत्पादन गर्ने रणनीति अपनाइनेछ ।
– उच्च मूल्य अभिवृद्वि हुने वस्तुहरुको पहिचान गरी तिनको उत्पादन र निर्यातलाई वढावा दिइनेछ ।
– भौगोलिक कठिनाइ र उच्च ढुवानी लागतका कारण वस्तु निर्यातले मात्र व्यापार सन्तुलन कायम हुन नसक्ने भएकाले सेवा क्षेत्रहरु जस्तो सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन आदि सेवाहरुलाई निर्यातजन्य वनाउने नीति तथा कानूनको व्यवस्था गरिनेछ ।
– केन्द्रमा ‘राष्ट्रिय विकास आयोग’ र प्रदेशहरुमा ‘प्रदेश विकास आयोग’ हुनेछन् । जसले सन्तुलित विकास योजना निर्माण गर्नेछन् ।
– केन्द्रमा एक ‘वित्त आयोग’ हुनेछ, जसले निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेशहरुलाई साधनश्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नेछ ।
– प्रारम्भमा प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम एक मुख्य विकास केन्द्रको पहिचान गरी त्यसको विशेषता अनुरुप त्यहाँ भौतिक, आर्थिक र अन्य पूर्वाधारहरु केन्द्रित गरेर त्यहाँ भौतिक, आर्थिक नमूना विकास केन्द्रको रुपमा अघि वढाइनेछ । (हेर्नोस, नक्सा —२)
– प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्थानीय विशेषता र क्षमताको पहिचान गरी तिनीहरुको विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।
– कर्णाली, सेती—महाकाली, हिमाली क्षेत्र, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति÷जनजातिहरु वसोवास गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रले विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ ।
– उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोेगको प्रतिवेदनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । कृषि क्षेत्रमा अझै बाँकी रहेको विविध रुपको सामन्ती भू–स्वामित्वको पूर्णरुपले अन्त्य गर्दै ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार सम्पन्न गरिने छ । हदवन्दी भन्दा वढी जमिन मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरुवा, सुकुम्वासी र गरीब किसानहरुलाई निःशुल्क वितरण गरिनेछ ।
– कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा ग्रहण गर्दै यसको ब्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर उपयुक्त कृषि नीति तर्जुमा गरिने छ । परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणलीलाई निरुत्साहित गर्दै साना किसानहरुलाई सहकारीमा संगठित भएर ब्यवसायीक खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । जमिनलाई महत्वपूर्ण उत्पादनको साधानको रुपमा स्थापित गर्दै बाँझो जमिन राख्न बन्देज लगाइने छ ।
– कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी वनाउन राज्यले विशेष संरक्षण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने छ । वैंक र वित्तीय संस्थाहरुवाट ब्यवसायीक खेती, पशुपालन, माछापालन, फलफूल खेतीका लागि २०% कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिने छ र ९% भन्दा बढीको ब्याज रकम अनुदानको रुपमा किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने छ ।
– तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका विशिष्ट, अनुपम तथा उच्च मूल्य, थोरै वजन र कम आयतन भएका कृषिजन्य वस्तुहरुको व्यवसायीक उत्पादन गरी निर्यात गर्न अभिप्रेरित गरिने छ ।
– किसानहरुलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्न देश भित्रै एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइने छ र कृषि औजार कारखाना संचालनमा ल्याइने छ । जैविक र प्राङगारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
– कृषि उपजहरुको वजार र भण्डारणको लागि कृषि सडक र शीत भण्डारहरुको निर्माणमा विशेष ध्यान दिइने छ । किसानहरुलाई उनीहरुका उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी गरिने छ । कृषि विमा र पशु विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गरिने छ ।
– कृषि पेशालाई आकर्षक र मर्यादित बनाई युवाहरुलाई यसप्रति आकर्षित गर्न कृषि पेशाबाट अवकाश पश्चात सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न किसान र राज्यको संयुक्त योगदानबाट ‘कृषक पेन्सन कोष’ को व्यवस्था गरिने छ ।
– कृषि पेशामा प्रत्यक्ष संलग्न किसानहरुलाई ‘किसान परिचय पत्र’ को ब्यवस्था गरिने छ, जसको आधारमा उनीहरुले आफ्ना वर्गीय प्रतिनिधित्व र राज्यद्धारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
– भूमिहीन र गरीव किसानले जमिन किन्न चाहेमा खरिद गर्ने जमिनलाई धितो राखी न्यून ब्याजदरमा १० बर्ष सम्मको लागि ऋण दिने ब्यवस्था गरिने छ ।
– किसानहरुलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने छ । हरेक गाउँपालिकामा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरी वाली प्राविधिक र पशु प्राविधिकको ब्यवस्था गरिने छ ।
– कृषि मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला तोकी समय समयमा अध्यावधिक गरिने छ ।
– नेपालमा उपलब्ध सवै प्रकारका बनहरुको सम्भाब्यता र आवश्यकताको आधारमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ । सम्पूर्ण देशको ४० प्रतिशत भूभाग बन क्षेत्रको रुपमा कायम गरिने छ ।
– तराई र मध्यपहाडका समथर इलाकाबाहेक देशको अधिकांश भूभागमा जैविक विविधता अनुकुलको बन तथा जडीवुटी खेती गरिने छ र त्यसलाई राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा विकास गरिने छ ।
– तराई–मधेस लाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन चुरेभावरलाई आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी त्यसको संरक्षण र विधिसम्मत उपयोगको जिम्मा त्यहाँ पहिल्यै देखि वसोवास गर्दै आइरहेका जनतालाई नै दिइने छ ।
– शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गरी स्वस्थ वातावरण कायम गर्न शहरी वन विकास कार्यक्रम लाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
– दिगो विकासका लागि वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न विशेष ध्यान दिइने छ र त्यस विपरित हुने गतिविधिलाई कडाइपूर्वक रोकिने छ । खाशगरी पहाडी क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन विग्रन नदिन आश्यक कदम चालिने छ । शहरी तथा औद्योगिक प्रदुषण नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरिने छ ।
– नेपाल पक्ष भएका वातावरणसम्वन्धी महासन्धीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । जैविक विविधता सम्वन्धी महासन्धी अन्तर्गत आनुवंशिक श्रोतमा पहुँच तथा आनुवंशिक श्रोतको उपयोग र लाभको वाँडफाँड सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अविलम्ब पारित गरिने छ ।
– पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले औपचारिक मान्यता दिइसकेको स्थितिमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्वका साथ अघि बढाइने छ । हिमालीय तथा पर्वतीय पर्यटन, सांस्कृतिक÷ धार्मिक पर्यटन, पर्या–पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, साहसी पर्यटन, पदयात्रा पर्यटन, दृष्यावलोकन पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन आदि विविध रुपहरुको विकास गरी विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।
– काठमाण्डौ–पोखरा–चितवन–सगरमाथा भन्दा वाहिरका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरेर र एयरपोर्ट, होटेल जस्ता अत्यावस्यक पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको तीब्र विकास गरेर आगामी १० बर्षमा २० लाख पर्यटक प्रतिबर्ष भित्रायाउने प्रयत्न गरिने छ ।
– निजगढमा दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साथै पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, धनगढी मा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । आगामी ५ बर्षमा थप ५ वटा ठूला हवाइजहाज खरिद गरिनेछ ।
– बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्यमार्गीहरुको धार्मिक पर्यटनस्थलको साथै अन्तराष्ट्रिय शान्ति केन्द्रको रुपमा विकास गरेर लाखौं विदेशी पर्यटकहरुलाई भित्रायाउने नीति लिइने छ ।
– ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटन स्थल जनकपुरमा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गरेर ठूलो संख्यामा धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।
– अहिले सम्म त्यति विकशित भैनसकेको तर भविष्यमा विकासको अथाह सम्भावना बोकेको सुदुर–पश्चिमको खप्तड, कर्णालीको रारा क्षेत्र र पश्चिमाञ्चलको ढोरपाटन क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलको रुपमा विकास गरिने छ । त्यसरीनै आन्तरिक धार्मिक÷ऐतिहासिक पर्यटनस्थलको रुपमा पूर्वको पाथिभरा, वराहक्षेत्र, हलेसी र पश्चिमको मनकामना– गोरखकाली, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्धारी आदिको विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ ।
– पर्यटनको प्रतिफल गाउँगाउँ सम्म पु¥याउन ‘होमस्टे’ र नयाँ नयाँ टे«किङ रुटहरुको विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ । हिमाल आरोहण लगायत पर्यटनवाट हुने आयको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम सम्वन्धित क्षेत्र र जनताको विकासका लागि खर्च गरिने छ ।
– तीब्र राष्ट्रिय औद्योगिकरण सम्वृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा अनिवार्य पूर्वशर्त हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै निजी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सरकारी लगानीमा ठूला, मझौला र साना तथा घरेलु उद्योगहरुको विकास गर्ने नीति लिइने छ । मुख्यतः घरेलु कच्चापदार्थ र श्रममा आधारित तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने वा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
– विविध कारणले रुग्ण बनेका उद्योगहरुको पुनर्संरचनालाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन गर्ने छ ।
– भारत र चीनको ठूलो बजारलाई मध्यनजर गरी खाशखाश दक्षिणी र उत्तरी सीमावर्ती इलाकामा र सम्भव भएसम्म प्रत्येक प्रदेशमा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ स्थापना गरिने छ ।
– उच्च स्तरीय लगानी वोर्डको क्षमता र कार्यदक्षताको वृद्वि गरी राष्ट्रिय महत्वका, ठूला तथा दीर्घकालीन लगानीका योजनाहरुमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
– नेपालका परम्परागत हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला जस्ता पेशा ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रीय हस्तकला ग्रामको ब्यवस्था गरिने छ ।
– महिला उद्यमी ब्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजी र वजारको प्रवद्र्धनमा सहयोग गरिने छ ।
– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र गैर–आवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिने छ ।
– युवा तथा सना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई युवा स्वरोजगार कोष मार्फत कर्जा प्रवाह गरी राष्ट्रिय औद्योगीकरणको आधार विस्तार गरिने छ ।
– देशमा उपलब्ध श्रोत साधन र पुँजी तथा विप्रेषण आय समेतको ब्यापक परिचालन गरी औद्योगीकरणमा विशेष टेवा पु¥याउन सम्पूर्ण सुविधाहरु एउटै डालोबाट उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिने छ ।
– स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कार्यालय, संस्थान आदिमा स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने नीति लिइने छ ।
– उद्यमी र श्रमिकहरुको हितमा समन्वय कायम गरी निर्वाध औधोगिक शान्ति कायम गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
– मुलुकको आर्थिक(सामाजिक रुपान्तरणको एक महत्वपूर्ण आधारको रूपमा जलस्रोतको विकास गरिनेछ । जलविद्युत उत्पादन, सिंचाइ, घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका आयोजनाहरुको निर्माण गरिनेछ ।
– विद्युतीय उर्जाको उपलब्धता र प्रयोगले मुलुकको समुन्नतिलाई सुनिश्चत गर्दछ । त्यसर्थ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण, सौर्य एवं वायु उर्जाको विकास एवं अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माण मार्फत आगामी ३ वर्षमा मुलुकलाई लोडशेडिङ्गबाट मुक्त गरिनेछ । आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण, यातायात तथा संचार, विज्ञान तथा प्रविधि विकास आदिमा आवश्यक विद्युतको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा हुने गरी आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिनेछ (हेर्नुहोस् चित्र १.२, र तालिका ७ र नक्सा ३ ) । यसका लागि जलाशययुक्त तथा गैर–जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकास कम्तिमा ३०ः७० को अनुपातमा गर्दै लगिनेछ । ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिदै आगामी १० वर्षमा सबै गाउँ वस्तीहरुमा बिजुली पु¥याइनेछ । एक राष्ट्रिय उर्जा ब्यापार कम्पनी स्थापना गरी जगेडा विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थसंग साटासाटको ब्यापार गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
– एक राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण कम्पनीको स्थापना गरी प्रसारण प्रणालीको विकासमा राज्यले विशेष भूमिका खेल्नेछ (नक्सा ३) । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनामा १५ किमि भन्दा लामो प्रशारण लाइन वा प्रवेश मार्ग बनाउनुपर्ने अवस्थामा यसमा लाग्ने लागत सरकारको बेहोर्नेछ । यी कामका लागि चाहिने जग्गा प्राप्तिमा सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
– जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गर्दा सर्वसाधारण जनता, आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरू, स्थानीय जनता तथा निकायहरुको क्षमतानुसार शेयर लगानी गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । राष्ट्रिय उद्योगपति, ब्यवसायीद्धारा यस क्षेत्रमा गरिने लगानीका लागि सहयोगी वातावरण तयार गरिदिनुका साथै आवश्यक कर छुट, तोकिएको समय र क्षेत्र भित्र जलविद्युत आयोजनामा पुनःलगानी गरेमा उक्त आयमा आयकर न्यून लाग्ने ब्यवस्था गरिने छ । मुलुकलाई आवश्यक ठूला परियोजनाहरु निर्माणमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
– आगामी ५ वर्षभित्र सबैलाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्ने व्यबस्था गरिनेछ । ग्रामीण इलाकामा प्रत्येक नेपालीले ५ मिनेटको पैदल दुरी भित्रमा खानेपानी प्राप्त गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २०७२ सालको चैत्र महिना भित्र सम्पन्न गरिसकिनेछ ।
– ग्रामीण क्षेत्रमा वायोग्याँस, लघु जलविद्युत लगायतका वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन मार्पmत आगामी ३ वर्ष भित्रमा नेपालका सम्पूर्ण गाउँबस्तीलाई धुँवाजन्य प्रदुषणबाट मुक्त गरिनेछ । माइक्रोहाइड्रो, वायुउर्जा तथा सौर्य उर्जा उत्पादनमा विशेष जोड दिइनुका साथै काठमाडौं जस्ता ठूला सहरहरूबाट निस्कने फोहरमैलाबाट पनि विद्युतीय उर्जा उत्पादन गरिने छ । यसरी आगामी १०, २० र ४० वर्षमा यी स्रोतहरुबाट विद्युतीय उर्जाको क्रमशः ५, १० र १५ प्रतिशत उर्जा निकालिनेछ (तालिकाः७)।
– अन्तर्राष्ट्रिरय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिको चाप, आयातमा सम्पूर्ण रुपमा निर्भर रहनुपर्ने वाध्यतालाई मध्यनजर राख्दै पेट्रोलियम पदार्थ माथिको परनिर्भरता कम गर्दै लैजान गाउँघरमा जताततै पाइने सजिवन (जाट्रोपा) बाट बायो डिजेल उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सजिवन खेतीलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्न नदी किनाराका सार्वजनिक जग्गा एवं खेर गएको सरकारी÷सार्वजनिक जग्गालाई दीर्घकालीन लिजमा लिई निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
– सडक, रेलमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ठूला नहर आदि ठूला भौतिक पूर्वाधारहरु नै समुन्नत नयाँ नेपालका मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग र रेलमार्गहरुको संजाललाई उच्च प्राथमिकताका साथ छिटो भन्दा छिटो समयमा पूरा गरिने छ । त्यो संजालले संघीय प्रदेशहरुलाई एक अर्का सँग जोडेर उनीहरुको सामथ्र्यलाई अभिवृद्वि गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । (हेर्नुहोस् नक्सा–१)
– सर्वप्रथम मध्य पहाडबाट पूर्व–पश्चिम जोड्ने मध्य– पहाडी लोकमार्ग पूरा गरिने छ । तराई मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने विद्युतीय रेलमार्म निर्मार्ण गरिने छ । त्यसैको समानान्तरमा हुलाकी मार्ग पूरा गरिने छ । भारत र चीन वीचको गतिशील पुलको काम गर्ने गरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली लोकमार्ग सहित अन्य केही उत्तर–दक्षिण लोकमार्गहरु पनि प्राथमिकता साथ निर्माण गरिनेछन् ।
– चीनको तिब्वतबाट आउने रेलमार्ग काठमाण्डौ हुँदै लुम्बिनी सम्म पु¥याइनेछ । त्यसले अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरु ल्याएर लुम्बिनीको विकासमा ठूलो योगदान गर्ने छ ।
– वाराको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र त्यसलाई काठमाण्डौ सँग जोड्ने फाष्ट ट्रयाकले काठमाण्डौ र तराई–मधेसको दूरीलाई नाटकीय ढंगले छोट्याउने छ र त्यस क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक असर पार्ने छ ।
– यी ठूला पूर्वाधारहरुको अतिरिक्त आगामी ५ बर्ष भित्र सवै जिल्ला सदरमुकामहरु जेड्ने सडक कालोपत्रे भैसक्ने छन् । त्यसरी नै संघीय पुनर्सरचना पछि बन्ने सवै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु सम्म सडक सञ्जाल पुगेको हुने छ ।
– सवै संघीय प्रदेशका राजधानीहरुको गुरुयोजना तयार गरेर योजनावद्ध शहरीकरण गरिने छ । पुराना अब्यवस्थित शहरहरुलाई पनि क्रमशः ब्यवस्थित पार्दै लगिने छ ।
– काठमाण्डौ उपत्यकालाई सुव्यवस्थित राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको रुपमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरुप विकास गरिने छ । उक्त कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न नवगठित ‘काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण’ लाई सवल र सुदृढ बनाउँदै लगिने छ ।
– प्रमुख लोकमार्ग, बन्दै गरेका लोकमार्ग र अन्य यस्तै ठाउँहरु छरिएर रहेका वस्तीहरुमा नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
– ‘सवैको लागि सुरक्षित आवास’ का लागि नयाँ राष्ट्रिय आवास नीति निर्माण गरिने छ र आवास विहीन सुकुम्वासीहरुको लागि आवासको ग्यारेन्टी गरिने छ । ‘एक परिवार, एक आवास’ को विशेष कार्यक्रम मार्फत आगामी दश बर्षमा दश लाख आवास इकाइको निर्माण निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा गरिने छ ।
– आगमी ५ वर्ष भित्र सवैलाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्न व्यवस्था मिलाइने छ ।
– आगामी ५ वर्ष भित्र पूरै देशलाई खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने छ । शिक्षण संस्था, सार्वजनिक स्थल, काठमाण्डौ लगायतका ठूला शहरहरु र तराई–मधेस लगायतका क्षेत्रहरुमा महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक शौचालयहरु अभियानात्मक रुपमा निर्माण गरिने छ ।
– वाग्मती लगायतका सवै नदीहरुलाई प्रदुषणमुक्त राखन विशेष राष्ट्रिय कार्ययोजना वनाएर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ ।
– समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकासको चरणमा सहकारी आन्दोलनको विशेष ऐतिहासिक महत्व हुने भएकाले साना उत्पादनकर्ता र व्यवसायीहरुलाई उत्पादन, वितरण, उपभोग र वित्तीय सहकारीहरुमा संगठित भएर आर्थिक गतिविधि गर्न राज्यले विशेष प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने छ ।
– सहकारी अभियानलाई ब्यवस्थित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारको पालामा गठन भएको सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयलाई सवल, सक्षम र साधन श्रोत सम्पन्न बनाइने छ ।
– देशव्यापी रुपमा उत्पादन, वितरण र वित्तीय सहकारीहरुको संजाल गाउँ गाउँ सम्म विस्तारित गरेर मुख्यतः कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई टेवा पुर्‍याइने छ । विशेषगरी विभन्न प्रकारका वस्तुगत कृषि उत्पादन सहकारीहरुको विस्तारमा जोड दिइने छ ।
– प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा नमूना सहकारी गाउँ निर्माण गरी अभियान क्रमशः अघि बढाइने छ ।
– हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेर प्रत्येक गाविस र शहरका वडामा स्थापना भएका सुपथ मूल्यका उपभोक्ता सहकारी पसलहरुको समीक्षा गर्दै तिनीहरुलाई नयाँ ढंगले अघि बढाइने छ ।
– साना पुँजीको संकलन र परिचालन गर्ने वित्तीय सहकारीहरुलाई राज्यको तर्फबाट विशेष संरक्षण दिइने छ । गाउँ गाउँ र टोल सम्म पुगेको विप्रेषणको रकमलाई वित्तीय सहकारीहरु मर्फत परिचालन गरी पुँजी निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
– प्रतिस्पिर्धामा नमूनायोग्य ठहरिएका सहकारीहरुलाई हरेक बर्ष उच्च सम्मान सहित पुरस्कृत गरिने छ ।
– देशमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकासको प्रारम्भिक चरणमा बैंकिङ प्रणालीको विशेष महत्व र भूमिका हुने भएकाले विभिन्न प्रकारका वाणिज्य बैंक, विकास बैक, पूर्वाधार विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, उर्जा विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक, कृषि विकास बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामिण बैंक आदि लाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिने छ ।
– प्रत्येक गाविसमा कम्तीमा एउटा वित्तीय संस्था संचालन गर्ने नीति लिई वित्तीय सेवाको पहुँच देशव्यापी रुपमा विस्तार गरिने छ ।
– राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण आदिमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न विशेष नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिने छ ।
– पेट्रोलिय पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोगका वस्तुको सुपथ र सहज वितरणको आवस्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था गरी कालोवजारी र कृत्रिम मूल्यवुद्धि गर्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गरिने छ ।
– मजदूर, सुकुम्वासी र गरीवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावस्यक वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ब्यवस्था गरिने छ । विपन्न वर्गका जनतालाई ‘रासन कार्ड’ को ब्यवस्था गरेर सहुलियत दरमा अत्यावस्यक वस्तु उपलब्ध गराइने छ ।
– सवै नगरपालिका क्षेत्रमा अत्यावस्यक वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । देशमा सवै जिल्लामा बर्षमा कम्तीमा तीस कार्यदिन वजार अनुगमन गर्ने ब्यवस्था मिलाई कालो बजारी र नाफाखोरी नियन्त्रण गरिने छ ।
– पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई अत्यावस्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गरी ढुवानी र वितरणमा अवरोध आउन नदिने व्यवस्था मिलाइने छ । पट्रोलियम पदार्थको मूल्य समिकारक कोष खडा गरी जथाभावी मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरिने छ ।
– हिमाली भेगका जनताको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा रहेको असुविधालाई ध्यान दिँदै तिब्बत (चीन) सँगका नाकाहरु खोल्न विशेष पहल गरिनेछ ।
– शिक्षामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिनेछ । आठ कक्षासम्म शिक्षा सबैलाई अनिवार्य गरिनेछ । १२ कक्षासम्म सवैलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सिमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई पूर्णरुपले निःशुल्क हुनेछ ।
– देशव्यापी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेर पाँच बर्ष भित्र देशबाट निरक्षरता उन्मुलन गरिनेछ ।
– राज्यको कुल बार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा आएको ह्रासको छानबीन गरी गुणस्तर वृद्वि गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण र विकृति विसंगतिलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
– वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर कक्षा आठ देखि नै ठाउँ सुहाउँदो सिपमूलक शिक्षा दिइनेछ र विद्यालय पछि बहु–प्राविधिक (पोलिटेक्निक) र प्राविधिक शिक्षालाई व्यापक बनाइनेछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कमसेकम एक बहु–प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
– प्रत्येक संघीय प्रदेशमा कमसेकम एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ र केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र स्पष्ट परिभाषित गरिनेछ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक शिक्षाको रुपमा विकास गरिनेछ ।
– विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित ठूलो संख्यामा रहेका युवा–युवतीहरुलाई उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न खुला विश्वविद्यालय वा दूरशिक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनालाई तिव्रता दिइनेछ ।
– उच्च शिक्षामा निम्न वर्ग र समुदायको पहुँच स्थापित गर्न विशेष छात्रवृत्ति र छात्रावास सुविधाका साथै सरल र सुलभ शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरिनेछ ।
– निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कृषि तथा वन, इञ्जिनियरिङ, मेडिसिन, सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गरेर विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ ।
– स्वास्थ्य सेवामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिनेछ र सबै नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सिमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति, १५ बर्ष मुनिका बालबालिका, ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, गरिबीको रेखामुनिका नागरिक, जनयुद्ध र राजनीतिक आन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा र सबै महिलाहरुलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ ।
– सम्पूर्ण नेपालीका लागि प्रमुख ५० वटा रोगको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ ।
– विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिहजार जनसंख्याका लागि २.३ जना स्वाथ्यकर्मी हुनुपर्ने बताएपनि हामीकहाँ प्रतिहजार ०.३१ स्वास्थ्यकर्मी मात्र भएकाले त्यो अन्तर पूर्न र प्रतिहजार स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्वि गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
– स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दा एलोपेथिकको साथसाथै आयुर्वेदिक, होमोपेथिक, युनानी, एक्युपञ्चर, एक्युप्रेसर, प्राकृतिक चिकित्सा र योगसम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि उचित स्थान दिइनेछ ।
– हरेक गाविस÷गाउँपालिकामा कमसेकम एक स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था गरिनेछ र ‘एक गाविस एक डाक्टर’ उत्पादनलाई विशेष जोड दिइनेछ । गाउँ र विकट क्षेत्रमा सेवा गर्ने डाक्टरहरुलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ ।
– मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य सेवासँगै एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
– निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा मुलुकका विभिन्न स्थानमा आधुनिक सुविधायुक्त विशिष्टीकृत सेवायुक्त अस्पताल स्थापना गरी विदेशीहरुलाई औषधोपचार पर्यटनको लागि आकर्षित गर्ने र नेपालीहरुलाई उपचारको निम्ति विदेश जान निरुत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ ।
– हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारको पालामा निर्णय भएको विभिन्न ठाउँमा श्रम विनिमय केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइनेछ र देशभरका शैक्षिक तथा गैर–शैक्षिक बेरोजगारहरुको वास्तविक लागत तयार गरिनेछ ।
– हाम्रो पार्टीको सरकारले अघि बढाएको रोजगारी ग्यारेन्टी विधेयकलाई यथासक्य छिटो नयाँ सदनबाट पारित गराएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
– देशमा श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै श्रमिकहरुको हकहित संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
– देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हकहित संरक्षण गर्न र उनीहरुमाथि हुने ठगी र शोषणको अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका विकृति विसंगति हटाउँदै उक्त पेशालाई मर्यादित बनाउन सहजीकरण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै अध्यागमन डेस्कको व्यवस्था गरिनेछ ।
– संवैधानिक रुपमै मिडियालाई राज्यको चौथो अंगको रुपमा मान्यता प्रदान गरी राष्ट्रिय मिडिया आयोगको गठन गरिनेछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको पूर्ण संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिनेछ । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि रुपले कुण्ठित र हनन गरिनेछैन ।
– श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारको रक्षा, वृत्ति विकास, बिमाको व्यवस्था, द्वन्द्व पीडित पत्रकारलाई राहत र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
– मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको रुपमा मान्यता दिई सञ्चार साधनको खरिद, विद्युत महसूल लगायतमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।
– साना लगानीका पत्रपत्रिका, सामुदायिक रेडियो, दुर्गम क्षेत्रका मिडिया एवम् महिला, मधेसी, दलित, जनजाति लगायत सिमान्तकृत समुदायबाट सञ्चालित मिडियालाई राज्यबाट विशेष राहत र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
– हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राज्यका सबै प्रकारका विज्ञापन सबै मिडियाले पाउनेगरी समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– उच्चस्तरीय सूचना प्रविधिको पहुँच सबै गाउँ र व्यक्तिहरुमा पु¥याइनेछ ।
– पछिल्ला बैज्ञानिक आविष्कार र विकसित प्रविधिको प्रयोग विना उन्नत आधुनिक राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन भन्ने सोंचका साथ विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ । त्यसका लागि अनुसन्धान तथा विकास ९च्भबकभबचअज ७ म्भखभयिऊभलत० मा कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको कम्तिमा एक प्रतिशत लगानी गरिनेछ । अनुसन्धान, प्रविधि आयात, मानव संसाधनको विकास र पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिइने छ ।
– विभिन्न निकाय अन्तरगत सेवा प्रदान गर्दै आएका प्रयोगशालाहरुलाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानशाला बनाइने छ र हालको संस्थागत संरचनामा सुधार गरी ती अनुसन्धानशालालाई स्वायत्त र प्राज्ञिक संस्था अन्तरगत व्यवस्था गरिने छ । बैज्ञानिकहरुको स्वतन्त्र चिन्तन र आविष्कार क्षमतालाई प्रवर्धन र प्रस्फुटित गर्न स्वायत्त आविष्कार केन्द्रहरु ९क्ष्ललयखबतष्यल ऋभलतचभक० को स्थापना र संचालन गर्ने÷गराइने छ ।
– अपेक्षित आर्थिक क्रान्तिकालागि आवश्यक ठूलो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निम्ति प्रत्येक संघीय प्रदेश र देशैभरी विभिन्न प्रकृतिका प्राविधिक अध्ययन केन्द्रहरुको संजाल निर्माण गरिनेछ र लाखौंको संख्यामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षालाई प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
– युवाहरुमा अन्तरनिहित सिर्जनशील क्षमता र असीमित उर्जाको उपयोग देश र जनताको निम्ति गराउनका लागि र नेपाली युवाहरुका समस्या समाधान गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय युवा आयोग को गठन गरिनेछ । १६ वर्ष उमेर पुगेका युवाहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
– नेपालमा खेलकुदको विकासको राम्रो सम्भावना भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रिय खेल रणनीति तयार गरेर योजनावद्ध ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– खेलकुदलाई परिणाममुखी, विद्यालय केन्द्रित र गाउँमुखी बनाउन पहल गरिनेछ । त्यसका लागि खेल प्रशिक्षण, पूर्वाधार विकास र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
– प्रत्येक निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा एक खेल शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्रमा खेल महाविद्यालय ९क्उयचतक ऋयििभनभ० स्थापना गरिनेछ ।
– खेलकुद पूर्वाधार विकासको निम्ति प्रत्येक गा.वि.स. मा एक खेल मैदान, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सेमी–कभर्ड हल, पाँच विकास क्षेत्रमा १÷१ रंगशाला र एक अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गरिनेछ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मानजनक सुरक्षाभत्ता र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
– साहित्य, कला र संस्कृति कुनै पनि समाज र राष्ट्रको दर्पण र सभ्यताको मापक भएकाले नेपालका सबै भाषा साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
– मौलिक नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको खोज अनुसन्धान र संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ । नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सिर्जना गरिएका साहित्यिक, कलाकृतिहरुको नेपाली भाषामा र नेपाली भाषाको अन्य भाषामा अनुवादको साथसाथै सबै नेपाली राष्ट्रिय भाषाका कृतिहरुको विदेशी भाषामा अनुवाद गरी प्रचारप्रसार गर्न राज्यले सहयोग गर्नेछ ।
– कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले प्रोत्साहित, सम्मानित र पुरस्कृत गर्नेछ । साथै उनीहरुको जीवन विमा, जीविकोपार्जन र औषधोपचार लगायतको सहयोगको लागि एक ‘कल्याणकारी कोष’ स्थापना गरिनेछ ।
– नेपाली चलचित्र क्षेत्रको समस्टीगत विकास र सम्वद्र्धनको लागि ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’ ल्याइनेछ । चलचित्र क्षेत्रलाई ‘सांस्कृतिक मनोरञ्जन उद्योग’ को रुपमा मान्यता दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न देशभित्र एउटा अत्याधुनिक ‘इन्डोर सूटिङ स्टुडियो’ निर्माण गरिनेछ ।
– संगीत, चलचित्र लगायतका क्षेत्रहरुमा प्रतिलिपि अधिकार हननको गम्भीर समस्या रहेकाले त्यसको निवारणको लागि आवश्यक कानूनी र अन्य व्यवस्था गरिनेछ ।
– पूरै देशलाई छुवाछुत मुक्त इलाका घोषणा गरिनेछ र दलितहरुमाथि हुने छुवाछुत भेदभावलाई मानवता विरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराधका रुपमा किटान गरी दोषीलाई कडा सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
– संवैधानिक अधिकार सम्पन्न दलित अधिकार आयोग गठन गरिनेछ ।
– दलित समुदायका परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायिक बनाउने ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ ।
– दलित विद्यार्थीलाई पूर्व–प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । सबै प्रकारका प्राविधिक उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति कोटा बढाउँदै लगिनेछ ।
– दलितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।
– छुवाछुत भेदभाव र जातका आधारमा हुने हिंसाको मुद्दा हेर्न अदालतहरुमा फाष्ट ट्राक बेञ्च गठनको व्यवस्था गरिनेछ ।
– भूमिहीन र आवासविहीन दलितहरुलाई आवास, खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारीको विशेष सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ ।
– मुस्लिम देशको ठूलो उत्पीडित अल्पसंख्यक समुदाय भएकाले उनीहरुलाई विशेष अधिकार सहित राज्य, समाज र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको व्यवस्था गरिनेछ ।
– राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगलाई शक्तिसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाइनेछ ।
– मुस्लिमहरुको विशिष्ठ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक पहिचान र अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नेछ ।
– विभिन्न प्रकृतिको अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको कुल जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै अंगहरुमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।
– अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ । उनीहरुलाई रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
– सबै प्रकारका अपांगहरुको वर्गीकरण गरी उनीहरुलाई सम्मानजनक ढंगले जीवन यापन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा क्रमशः बृद्धि गर्दै लगिनेछ ।
– सार्वजनिक स्थल र कार्यालयहरु अपांगमैत्री बनाइनेछ ।
– ज्येष्ठ नागरिकहरुले देश र समाजलाई गरेको योगदानको कदर गर्दै राज्यले दिंदै आएको मासिक भत्तामा उल्लेख्य बृद्धि गरिनेछ र उमेरको हद ६५ वर्ष कायम गरिनेछ ।
– ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।
– ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा विशेष छुट दिइनेछ र कतै पनि लाइन लाग्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
– एकल, असहाय वा परिवारबाट उपेक्षित ज्येष्ठ नागरिकहरुको बसोबासको निम्ति प्रत्येक प्रान्त र ठूला शहरहरुमा विशेष आवास गृहको व्यवस्था गरिनेछ ।
– ज्येष्ठ नागरिकहरुका विशिष्ठ अनुभव, क्षमता र सिपको सदुपयोग गर्न विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ ।
– यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई उनीहरुको वास्तविक परिचय सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
– उनीहरुमाथि हुने सबैखाले भेदभावको अन्त्य गर्दै उनीहरुलाई रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
– यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको लागि विशेष छात्रावास वा आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।
– ‘‘पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरलाई दुई तिहाई मत
– जसको नीति उसको नेतृत्व, राष्ट्रको नेता अध्यक्ष क.प्रचण्ड !
– गोलाकार भित्रको हँसिया–हतौडामा मतदान गरौं
– पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरलाई दुइ तिहाइ मत
– पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान
– पहिचान सहितको संघीयता र समावेसी–समानुपातिक लोकतन्त्र
– एकीकृत नेकपा (माओवादी) को परिकल्पना
– युवाहरुलाई पूर्ण रोजगार र स्वरोजगार
– जसको नीति उसको नेतृत्व
– एकीकृत माओवादीलाई सवैको भोट